Ukubaluleka kwemarike yotshintshiselwano lwangaphandle kuqoqosho | Ezezimali
Ukuba kukho iasethi yezemali ebaluleke ngokukodwa kuqoqosho, yimarike yotshintshiselwano lwangaphandle. Wakhe weva malunga nayo kwaye isenokuba ikuncede ukuba imisebenzi yakho yezoqoqosho ibe yinzuzo. Kwiminyaka emininzi ibe yindawo ekubhekiswa kuyo ukumisela ubudlelwane beshishini, hayi kuphela kuwo onke amazwe omhlaba, kodwa naphakathi kwabantu. Ngesi sizathu kubaluleke kakhulu ukuba ube nolwazi olupheleleyo malunga nokuba kuthetha ntoni kubudlelwane bezoqoqosho.
Ukuba sithetha ngemarike yemali, sithetha ngokubhekisa kwi Forex. Sisishwankathelo segama lesiNgesi i-Foreign Exchange kwaye kwenzeka ukuba yenye ye iimarike Eyona nto isebenzayo emhlabeni kwaye ibonakaliswe ngokunikezelwa ngamandla. Ewe, zonke iintlobo zeemali zamanye amazwe okanye iimali zamanye amazwe ziyathengiswa kuyo. Ayisiyiyo kuphela eyaziwayo, njenge-euro, idola yaseMelika, iFranc yaseSwitzerland okanye iponti yaseBritane, phakathi kwezinye zezona zibalulekileyo. Kodwa abanye abavela kuyo nayiphi na indawo kwezoqoqosho.
Ngale marike ikhethekileyo yezemali, iimali bathengisa ngalo lonke ixesha kwaye bafumana lonke uluhlu lotshintsho kumaxabiso abo. Ezi ntshukumo zisetyenziswa ngabatyali mali ukuzama ukwenza ukuba imali yabo ekhoyo ibenenzuzo. Ayothusi into yokuba yenye yezona ntengiso zisebenzayo ehlabathini kuba ingatyalwa phantse kuyo nayiphi na imali emhlabeni. Apho ukungazinzi okuphezulu kwamaxabiso yenye yezona zinto zixhaphakileyo kuzo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba uvule kwaye uvale izikhundla kwiseshoni enye kwiimarike ze-equity. Umahluko obanzi phakathi kwezibonelelo kunye nokukhubazeka onokufumana ukusukela ngoku.
2 Ukuthengiswa kwemali yelinye ilizwe
3 Zinjani ezi marike?
4 Ngaphezulu kokurhweba
5 Imisebenzi yeemarike zangaphambili
6 Ukufika kwemali yedijithali
Ewe kunjalo, ukubonakala kwayo kungenxa yesizathu esithile kwaye inento yokwenza nento yokuba zeziphi ubudlelwane kwezoqoqosho. Ngale ndlela, awungekhe ulibale ukuba le ntengiso yazalwa inenjongo ecacileyo kwaye ayisiyonto ngaphandle kokuququzelela ukuhamba okufumaneka kurhwebo lwamanye amazwe. Yonke into iyathengwa ithengiswe ngemali, nokuba ibiyintoni na. Ukuya kwinqanaba lokuba yiyo enika ixabiso kwimisebenzi eyenziwayo kwihlabathi liphela. Ngekhonkco ethe ngqo kwinto eyixabiso lemali. Akumangalisi ukuba imigaqo-nkqubo yezemali isekwe kwiziphumo ezinikezelwa ziimarike zemali.
Kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba utshintshiselwano lwangaphandle sisixhobo sokuyila umgaqo-nkqubo wezoqoqosho welizwe. Ngaphaya kwamanye amaxabiso abalulekileyo oqoqosho. Apho indawo elungileyo yokusebenza kwamazwe aphesheya yenziwa ngohlobo oluthile lwezemali. Njengomzekelo, kwimeko ethile euro nedola evela eUnited States. Ngesi sizathu, utshintsho olwenzeka kwiimarike apho zidweliswe khona lubaluleke kakhulu. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba banokubangela uqhwithela olukhulu lwezezimali, njengoko kwenzekile kumashumi eminyaka akutshanje. Okanye ubangele ukwehla ngokukodwa kwezoqoqosho.
Ukuthengiswa kwemali yelinye ilizwe
Kukubaluleka kwale asethi yemali kubaluleke kakhulu ukuba kwenziwe nawuphi na umsebenzi wezorhwebo. Ukuya kwinqanaba lokuba ngokwefayile ye- Ibhanki yokuHlaliswa kwaMazwe ngaMazwe, Iziphumo zokuqala zehlabathi ezivela kwi-2016 Triennial Banking Market Currency and Surivatives Survey zibonisa ukuba ukurhweba kwiimarike zemali kufikelela kwi-US $ XNUMX trillion ngeli xesha. Lo ngumfanekiso oqaqambisa ukubaluleka kokuveliswa kweemali kukuhamba kwemali ezinkulu kwihlabathi liphela.
Ukuze le nkqubo ikhule ngokuchanekileyo, iimali kufuneka zilawulwe ukufumanisa ixabiso lazo. Kwaye ngale ndlela, ziimarike zemali ezisebenzayo abalamli kuxhomekeke kumthetho wonikezelo kunye nebango kumzuzu ngamnye. Ngokwahluka rhoqo kwikoteyishini yamaxabiso abo kunye nabo, abatyali zimali abancinci nabaphakathi banokuthatha ithuba lomsebenzi wabo kwezi marike zikhethekileyo.
Zinjani ezi marike?
Iimarike zezemali apho ezi zinto zidweliswe zifana kakhulu nolunye utyalo-mali. Umzekelo, ukuthenga nokuthengisa izabelo engxoweni. Kodwa nge-nuance encinci ekufuneka uyithathele ingqalelo ukusukela ngoku. Akukho enye ngaphandle kokwahluka kwayo okuqhubekayo, okunokukunceda ukuba wenze imisebenzi yakho yorhwebo. Unokufumana imali eninzi kwezi ntshukumo, kodwa ngenxa yesizathu esifanayo, ushiye i-euro eninzi endleleni. Ngalo lonke ixesha ungalibali umngcipheko obandakanyeka kwimisebenzi yakho. Ngaphezulu kwezinye iiklasi zotyalo-mali oluqhelekileyo.
Ukusuka kule meko ngokubanzi, kubaluleke kakhulu ukuba uyazi ukuba kubaluleke kakhulu ukulungisa amaxabiso okuthenga kunye nokuthengisa. Phakathi kwezinye izizathu kuba imalunga imisebenzi eqinile kakhulu. Olunye uphawu olubaluleke kakhulu kule marike yezemali bubukho bokungazinzi okuphezulu kwaye oko kungumqobo ekusebenzeni ngoxolo olukhulu kwezi zindululo zotyalo-mali. Kwelinye icala, kutyalo-mali olucetyiswayo ixesha elifutshane kakhulu. Nokuba ngeyure ungazanelisa iimfuno zakho zotyalo-mali kule asethi ethile yemali.
Iimali, kwelinye icala, zigqitha kwinto efumanekayo kwiimarike zotyalo-mali. Kuba, enyanisweni, ukuba zibonakaliswa yinto ethile, kungenxa yokuba bekungekho ntengiso yelinye ilizwe, intengiselwano yamazwe aphesheya ibiya kufana nokutshintshiselana ngeemveliso kwaye kuya kubakho inkululeko kwi amaxabiso asekhaya elizwe malunga namazwe aphesheya. Oku kunjalo, kongeza ukubaluleka ngakumbi kwiziphumo ezithi zithathe isenzo sabo. Nangona kuyinyani ukuba zimbalwa kuphela ezo zijolise kuninzi lwemisebenzi eyenziwayo kumazwe kwihlabathi liphela.
Kule meko, eyona ndima ibalulekileyo ihambelana nemali yaseMelika. Kude kube kutshanje ibilawula uninzi lwentengiselwano yorhwebo kunye nemarike. Kude kube Imali eqhelekileyo yaseYurophu, i-euro, kwaye le misebenzi ihanjiswe phantse ngokulingana. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni iimarike zemali zizii-protagonists kwinxalenye enkulu yemisebenzi eyenziwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Hayi ngelize, indawo elungileyo yeearhente zezezimali zilindile ngalo lonke ixesha lokutshintsha kwazo kwixabiso.
Imisebenzi yeemarike zangaphambili
Enye into ekufuneka icacisiwe ngeli xesha yinxaxheba kolu hlobo lweemarike zezemali. Ewe, imisebenzi yayo ichazwe kakuhle kwaye kuyadingeka ukuba uyifumane le nto ukusukela ngoku. Kungenxa yokuba, Yena imarike yangaphambili izalisekisa imisebenzi emibini ephambili kwimishini yayo. Omnye wabo uhlala ekuguquleni imali yelinye ilizwe ibe yimali yelinye. Le mbono iqondakala ngokulula kuso nasiphi na isicwangciso sokwenza imali. Kodwa kwelinye icala, okwesibini imisebenzi yayo isekwe ekunikezeleni ukhuseleko oluncinci ngokuchasene nomngcipheko wotshintshiselwano olu hlobo lwemisebenzi ekhethekileyo ibandakanya. Ngendlela ethile ivelisa uhlobo lwe ukukhusela intshukumo eziphuhliswe kwiimarike zezemali zezi mpawu.
Kuba njengokuba usazi kakuhle, umngcipheko wale ntshukumo uphezulu kunezinye iiasethi zemali oqhele ukusebenza ngazo yonke imihla. Kwaye ubize ezinye amanyathelo okukhusela ephezulu ukuze ugcine ngaphezulu kwazo zonke izikhundla zakho. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba ingengabo bonke abatyali mali abakwimeko yokusebenza kwezi zixhobo zotyalo mali. Ukuba awunayo inkcubeko eyoneleyo yokusebenza, kuya kuba ngcono ukuyeka kwaye ubhekise iiasethi zakho kwelinye udidi lweeasethi zemali ezintsonkothileyo ngokobume bazo kunye noomatshini kwiimarike zemali.
Ukufika kwemali yedijithali
Esinye seziganeko ezichaphazelekayo kwiinyanga ezidlulileyo ibe yile ukufika kweemali ezibonakalayo. Kodwa ke lumka kakhulu ngemisebenzi yabo kuba ukuphela kosuku ayifani nokuba idityaniswe njengeemali zemali. Yinto eyahluke ngokupheleleyo engenanto yakwenza nesihloko esijongana naso. Kodwa ngokuchaseneyo, iya ngaphezulu kokunye okucacileyo kwaye ngakumbi kuyingozi. Iziphumo ezivela kwimisebenzi yazo, njengoko ubona kwezi ntsuku.
Ezi mali zemali zinokuhlaziywa kwakhona ngokukhawuleza kufutshane ne-100% kunosuku olulandelayo eziza kushiyeka kwiimarike ngepesenti efanayo okanye ngamandla amakhulu. Ngomngcipheko ocacileyo wokukushiya kwiimarike icandelo elibaluleke kakhulu kulondolozo lotyalo mali. Ukusuka kule meko, iimali ezibonakalayo azinakuthelekiswa, umzekelo, nefranc yaseSwitzerland, iponti yaseBritane okanye yen yen efanayo yaseJapan. Yinto eyahlukileyo eyahlukileyo eyimali. Le yinto ekufuneka uyithathele ingqalelo ngoku ukulungisa nayiphi na intshukumo engaqhelekanga kwiakhawunti yakho yokujonga. Into abanye abatyali zimali abancinci nabaphakathi kwihlabathi jikelele abayityholayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Ezopolitiko » Ukubaluleka kwemarike yotshintshiselwano lwangaphandle kuqoqosho